Ihlobo lizoshisa ikakhulukazi esifundeni saseMedithera | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ihlobo lizoshisa ikakhulukazi esifundeni saseMedithera
Ngenkathi ukushisa okukhulu kakhulu kuzophela kuleli sonto, ihlobo elibi kakhulu liseza. Ihlobo ebesingathi selithuthuke okungenani izinsuku eziyisithupha kusukela lapho amazinga okushisa ajwayelekile kakhulu ngoJulayi / Agasti aqoshwe ezingxenyeni eziningi zezwe: bekufika ku-42ºC ezindaweni ezinjenge-Andalusia eseningizimu, iMadrid noma iPamplona.
Okuphambene okuhle okushisayo kuyaqhubeka, ikakhulukazi olwandle futhi, ngaphezu kwakho konke, eMedithera lapho kunamaphoyinti angaphezu kwe-27ºC, lapho kufanele abe ngu-23-24ºC. Lokhu kuzoba namiphi imiphumela?
Ulwandle olufudumele ngokungajwayelekile yilokho ngidinga ihlobo ukuze lishise ngokulinganayo. Ngalesi sikhathi umoya ovame kakhulu umoya wasolwandle, okuyiyona enganciphisa amazinga okushisa noma, ngokuphambene nalokho, kubangele ukuthi bakhule kakhulu, nokungenzeka kulo nyaka njengoba kukhonjisiwe ku Isibikezelo sakamuva sonyaka esivela ku-State Meteorological Agency (AEMET).
Yize, ngaphezu kokushisa, okungase kwenzeke yilokho lina kakhulu, amanzi ahlala edingeka kakhulu kule ngxenye yeSpain phakathi nezinyanga ezishisa kakhulu zonyaka. Lezi zimvula zenzeka ngenxa yokuthi i-Isolated Depression at High Levels (DANA), ebonakala ngokuletha umoya obanda kakhulu emazingeni aphezulu asemkhathini, itholakala oLwandle iMedithera, oluya ngasekupheleni kwehlobo (noma ekuqaleni, njengoba okwenzeka kulo nyaka) kunamazinga okushisa aphakeme kakhulu (27-30ºC).
Isithombe sitholwe ngenhlanganisela yedatha evela eziteshini ze-infrared zesethelayithi ye-NOAA-19 ekhombisa ukushisa kolwandle.
Isithombe - Isithombe-skrini sewebhusayithi ye-AEMET
Lo mehluko kumanani wokushisa kudambisa umoya- Izindimbane zomoya zikhuphuka ngokushesha futhi zigcwale ngokushesha, okuholela kulezi zimvula ezinkulu.
Ngenkathi isiphepho singeke size okungenani kulezi zinyanga ezimbili ezizayo, kungenzeka ukuthi kukhona. Noma kunjalo, ngasekuqaleni kwekwindla izimvula zivame kakhulu, ngakho-ke uma ungomunye walabo abazithokozelayo, ngeke ulinde isikhathi eside 🙂.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ihlobo lizoshisa ikakhulukazi esifundeni saseMedithera
Amagagasi okushisa abulalayo azoba njalo
Yiziphi izintaba-mlilo ezisebenzayo eMhlabeni?